I-China Professional Tattoo Thermal Copier, yokuGqithisela oomatshini bokuprinta kunye neFektri | MOLONG
Umatshini wokuGqithisela iTattoo Thermal
(1) Ukuxabana nokusebenza simahla- kusebenza nje ngomatshini wefeksi
(2) Iyunithi ehlanganisiweyo ayizukuthatha indawo exabisekileyo kwisitudiyo sakho se tattoo
(3) Mfutshane ixesha elichithwe ekuzobeni ngokuthe ngqo umfanekiso kulusu
(4) Vumela ufumane umfanekiso ohlukanisiweyo, ogqityiweyo, omangalisayo
(5) Yenza itattoo yakho isebenze ngakumbi
(6) I-USB iyahambelana, inokuprinta imifanekiso kunye neekopi ezigcinwe kwiPC yakho
(7) Kulula ukuthatha, ubunzima bokukhanya, ixabiso elifanelekileyo, umgangatho ophezulu
(8) Isitokhwe esipheleleyo ngalo lonke ixesha
I-1.Portable kunayo nayiphi na ikopi yemveli.ubunzima obuncinci kodwa umsebenzi ofanayo.
2.Complied kunye neadaptha elungele igalelo 100-240V Kwaye onke amazwe 'amandla akhokelayo.
4.Yomelele kwaye kulula ukuyigcina.
1 x Umatshini wokudlulisa
1 x incwadi yesiNgesi
1 x Intambo yamandla
Ubungakanani obukhulu, amaxabiso asezantsi !!!!!
Ububanzi bokuSebenza ngokuSebenzayo: 210 mm
Ubungakanani boxwebhu: A5-A4
Ukutyeba koXwebhu: 0.06 mm-0.15mm
Amandla: AC 110V-220V; 50Hz / 0.46A
Ngesiqhelo: Utshintsho phakathi kweentlobo ze-tow zemeko yokukhanya. Xa umsebenzi wekopi oqhelekileyo uqala, ukukhanya okuqhelekileyo kuyasebenza.
Ubunzulu 1: Ukuseta amaxwebhu akhutshelweyo ngobunzulu 1. Xa ubunzulu 1 busebenza, ubunzulu 2 buyacima
Ubunzulu 2: ukuseta amaxwebhu akhutshelweyo ngobunzulu 2. Xa ubunzulu 2 busebenza, ubunzulu 1 buyacima.
Ikopi: Ukuqala umsebenzi wekopi.
Yeka: Ukumisa umsebenzi wekopi ..
Amandla: Ukukhanya kubonisa ukuba umatshini ulungiselelwe ukusebenza.
Impazamo: Ukukhanya kukubonisa into engalunganga eyenzekileyo kumatshini. Xa i-TPH ishushu ngokugqithisileyo, ukukhanya kuyaqhubeka.
1. Ukuba ufuna ukumisa umsebenzi wokukopa, nceda ucofe iqhosha "YIMA".
2. Ukuba isandi sesilumkiso siyakhala, izibane ze-ERROR ziyasebenza ziyeke ukukopa phambi kwexesha;
ITattoo Thermal Copier ivumela umzobi we tattoo okanye ingcali ukuba ikope uyilo kwiphepha le-stencil ngokukhawuleza nangokufanelekileyo ngamanyathelo ambalwa alula.
Le Tattoo Thermal Copier inobunzima be-1.6 kg / 3.5 lb kuphela, ilula kwaye incinci ke ngoko kulula ukuyiphatha. Icwecwe ngokwaneleyo ukuba ilingane phantse naphina. Unokwenza indalo ye tattoo ngalo naliphi na ixesha naphi na apho uthanda
Lo mshicileli we tattoo unesantya sokudlulisa ngokukhawuleza, ukushisa okuphantsi, ingxolo ephantsi kunye nokusebenza okuzinzileyo. Ukuhanjiswa kwePhepha lokuDlulisa elihambelanayo: I-approx 8.5 intshi x 11 intshi (W * L). Iyahambelana nevolthi ye-100-240v, inokusebenzela wena kwihlabathi liphela
Lo mshicileli ulula kwaye unokushukunyiswa ngokukhawuleza kwaye kube lula ukugcinwa, ukukunika lula ngakumbi. Unokwenza indalo ye tattoo ngalo naliphi na ixesha naphi na apho uthanda.
Yenziwe ngezinto ze-ABS, eziyindalo, zikhuselekile kwaye zihlala ixesha elide zisetyenziswa. Ubungakanani obuphezulu bomatshini we tattoo kubazobi be tattoo Kulula ukusebenza. Akukho lungelelwaniso lufunekayo kunye nokonga ixesha.
Egqithileyo I-32mm MO yeCartridge yeCartridge eQinisekisiweyo yokuBamba iTattoo yenaliti yeCartridge
Okulandelayo: Ubuchwephesha beCopper Tattoo Coil Machine Umatshini weCNC oCwengiweyo oMatshini weTattoo oMatshini
Iifayile ezili-12 zokuBhoboza isiXhobo seKhonkco seKhonkco seNdlebe ...
Ezilahlwayo Alahliweyo Tattoo bamba 25MM Nge S ...